people Nepal » बजेट पारित गरेपछि संसद् के हुन्छ ? बजेट पारित गरेपछि संसद् के हुन्छ ? – people Nepal
Posted on September 23, 2021 by Tara Nidhi
काठमाडौं,असोज ७,प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बजेट पारित भएपछि अन्त्य गरिने सम्भावना बढ्दै गएको छ। वडा दसैँ नजिँकदै गएकाले त्यसअघि नै अधिवेशन अन्त्य गर्ने अवस्था आउने देखिन्छ। सरकारले यस विषयमा कुनै जानकारी नदिए पनि संसद्मा प्रतिपक्षले नाराबाजी गरिरहेका कारण बजेट पारित भएपछि अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना बढेको हो ।